ကရင်ဒေသ ဘိလပ်မြေစက်ရုံ စီမံကိန်း ရွာ ၂၀ ခန့် ပြောင်းရမည် | ဧရာဝတီ
ကရင်ဒေသ ဘိလပ်မြေစက်ရုံ စီမံကိန်း ရွာ ၂၀ ခန့် ပြောင်းရမည်
ဂျူးဂျူးလှိုင်| December 22, 2012 | Hits:9,133
3 | | ဘိလပ်မြေ စက်ရုံဆောက်မည့် လုပ်ကွက်တခုတွင် ပါဝင်သော ဘားအံခရိုင်ရှိ လှိုင်းကလေး တောင် (ဓာတ်ပုံ – ဧရာဝတီ)
ကရင်ပြည်နယ် ဘားအံမြို့နယ် သံလွင်မြစ် အရှေ့ဘက်ဒေသတွင် အိန္ဒိယ ကုမ္ပဏီတခုက တည်ဆောက်မည့် ဘိလပ်မြေစက်ရုံစီမံကိန်း နယ်မြေ အတွင်း ပါဝင်နေသော ရွာ ၂၀ ခန့် ဖယ်ရှားပေးရမည်ဖြစ်၍ ဒေသခံ ရွာသားများ အခက်အခဲ ကြုံနေရကြောင်း သိရသည်။
တောင် ၁၀ လုံးကို ဖြိုပြီး ဘိလပ်မြေစက်ရုံ တည်ဆောက်မည့် ယင်းစီမံကိန်းကြောင့် ကျေးရွာပေါင်း ၂၀ ခန့်မှ အိမ်ခြေ ၁၀၀၀ ၀န်းကျင် ရွှေ့ပြောင်း ပေးရမည်ဖြစ်သည်ဟု ဒေသခံများက ပြောသည်။ အာဏာပိုင်များက ပြောင်းရမည်ဟု ပြောဆိုသော်လည်း မည်သည့် နေ့ရက်တွင် ပြောင်းရွှေ့ရမည်ကိုမူ မသိရှိရ သေးပေ။
ထို ဘိလပ်မြေ စက်ရုံ တည်ဆောက်ရန် အတွက် ကမော်ညောင် တောင်၊ တောင်ဝိုင်း တောင်၊ ညောင်ပလိန်း တောင်၊ ဒေါင်ကလ နှင့် လဇန်တောင်၊ လဇန်တောင်၏ တောင်ဘက်ခြမ်း၊ လွန်းည တောင်၊ ဇွဲကပင် တောင်၏ တောင်ဘက်ခြမ်း၊ ကော်ကူး တောင်၊ မင်းဇန် တောင်တို့ ပါဝင်ကြောင်း သိရသည်။
“ကရင်ပြည်နယ် ဖွံဖြိုးတိုးတက်ဖို့၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း တွေရလာစေဖို့ ဆိုပြီး ပြောတယ်။ တကယ် ရ မရ ဆိုတာတော့ ဘယ်သူမှ မသိနိုင်သေးဘူး။ ဖယ်ပေးရမှာက ရွာတွေ၊ လူတွေ၊ မြေနေရာတွေ။ ပြန်ပေးမလား၊ မပေးဘူးလား ဆိုတာလည်း မသိ သေးဘူး”ဟု တောင်ကလပ် ကျေးရွာ နောင်သကန်ကွင်း မှ ဒေသခံ တဦးက ပြောသည်။
ရွာသားများအနေဖြင့် တောင်ယာလုပ်ငန်းကိုသာ အဓိက လုပ်ကိုင်ကြသူများ ဖြစ်၍ ဘိလပ်မြေ စက်ရုံတည်ဆောက်ခြင်းမှာ ၎င်းတို့အတွက် အကျိုးရှိစေနိုင်မည် မဟုတ်ဟုလည်း ဆိုသည်။
ဘိလပ်မြေစက်ရုံ တည်ဆောက်မည့် Shree Cement Limited (SCL) ကုမ္ပဏီသည် အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် ဘိလပ်မြေ ထုတ်လုပ်မှု အဆင့် ပဉ္စမမြောက် အကြီးဆုံး ကုမ္ပဏီဖြစ်ကြောင်း၊ တနေ့ တန် ၁၀၀၀ ကျ ထုတ်လုပ်သွားမည်ဖြစ်ပြီး ယင်းဘိလပ်မြေ စက်ရုံ စီမံကိန်းကြောင့် အမြဲတမ်း ၀န်ထမ်း ၄၇၅ ဦးခန့် နှင့် နေ့စား ယာယီ ၀န်ထမ်း ၁၅၀၀ နှင့်အထက် အလုပ်အကိုင်များ ရရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း SCL ကုမ္မဏီမှ တာဝန်ရှိသူ တဦးက ပြောသည်။
“မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကြီးမားတဲ့ အခြေခံ အဆောက်အအုံတွေ ပေါ်ပေါက်လာ တဲ့အခါ ပြည်တွင်း ဘိလပ်မြေ လိုအပ်ချက်က အလွန်ကြီးမား လာမှာ ဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် ကျနော်တို့ အနေနဲ့ ဒီတောင်တွေကို ဖြိုပြီး ဘိလပ်မြေ စက်ရုံ တည်ဆောက်တာပါ။ နောက် ပိုင်းမှာ နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ ၀င်လာမယ်၊ နိုင်ငံခြားသား ၀င်ရောက်လာတာ တွေလည်း များလာမယ်၊ ကွန်ဒိုတွေ များလာ မယ်၊ ရုံးခန်းတွေ ဖွင့်လာမယ်၊ နောက်ပိုင်းမှာ လိုအပ်ချက်တွေ ရှိလာမယ်။ ဒီလို တည်ဆောက်တာကြောင့် ဒေသခံတွေ အနေနဲ့လည်း အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းတွေ ရရှိလာမှာ ဖြစ်တယ်”ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
ကရင်ပြည်နယ် မြေယာစုံစမ်း ရေးကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်နန်းစေ၀ါကမူ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ကိုယ်ကျိုးစီးပွား၊ ဒေသခံ လူထုအတွက် အားသာချက်၊ အားနည်းချက်များ ကွဲကွဲပြားစွာ သိရှိရန် လိုကြောင်းပြောဆိုသည်။
“ဘိလပ်မြေ စက်ရုံကြောင့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး မရှိဘူးလို့ ပြောတယ်။ ထွက်လာ တဲ့ဖုန်တွေကို ပြန်စုပ်ယူပြီး အချောထည် ပြန် လုပ်မယ်လို့ ပြောတယ်။ ထွက်လာတဲ့ အပူစွမ်းအင်ကိုလည်း လျှပ်စစ်ဘက်မှာ ပြန်သုံးမယ်ဆိုတာ ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကရင်ပြည်နယ် ဖွံဖြိုးတိုးတက်ဖို့ လုပ်တာလား၊ ဒါမှမဟုတ် ဒေသဖွံဖြိုးရေးထက် အကျိုးစီးပွား သက်သက်အတွက် လုပ်တာလား ကွဲကွဲပြာပြား သိဖို့ လိုတယ်။ စက်ရုံစီမံကိန်း ဆိုတာကလည်း စာရွက်ပေါ်မှာပဲ ရှိသေးတာ။ လူထုအတွက် အားသာချက် ဘယ်လောက်ရှိလဲ မသိရဘူး”ဟု ဒေါ်နန်းစေ၀ါ က ဆိုသည်။
ယခု တည်ဆောက်မည့် ဘိလပ်မြေစက်ရုံ အတွက် ပထမဆုံးဖြိုမည့် တောင် ၂ လုံး နှင့် ထုံးကျောက် ထုတ်ယူမည့် တောင်များသည် ဒေသတွင်းရှိ ကျေးရွာများနှင့် အလွန် နီးကပ်ကြောင်း၊ ဒေသခံများသည် ယင်း တောင်များမှ ထင်း၊ ၀ါးများ ခုတ်ယူ သုံးစွဲနေ ရကြောင်း၊ အင်းများမှ အသား၊ ငါးများ ရှာဖွေ စားသောက်နေရကြောင်း နှင့် ၎င်းတို့ စိုက်ပျိုးထားသည့် လယ်မြေများအတွင်း မြေ တူးစက်များ မကြာခဏ လာရောက်တူးယူသဖြင့် ချိုင့်ဝှမ်းများဖြစ်လာပြီး စိုက်ပျိုးရေး အခက်ခဲများ ကြုံတွေ့နေရကြောင်း သိရ သည်။
ပြီးခဲ့သည့် အောက်တိုဘာလ အတွင်းကလည်း ဘားအံခရိုင် ကော့ရင်းအောက် ကျေးရွာအုပ်စုရှိ တောင်နှစ်တောင်ကို ဖြိ်ု၍ ထုံးကျောက်မှုန့်များ ထုတ်ယူပြီး ဘိလပ်မြေ စက်ရုံ ဆောက်မည့် စိုးနိုင်ဖြိုး ကုမ္ပဏီအား ဒေသခံများ၏ ကန့်ကွက်မှုများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သေး သည်။
စိုးနိုင်ဖြိုး ကုမ္ပဏီ၏ ဘိလပ်မြေ စက်ရုံ ဆောက်မည့် လုပ်ကွက် ဧရိယာ ၃၂၀ ဧက တွင် လေထိတောင်၊ လှိုင်းကလေးတောင်၊ ဒေ သခံရွာ ၆ ရွာ၊ သာသနိက မြေနေရာများနှင့် လယ်မြေ အင်းအိုင်များ ပါဝင်နေကြောင်း သိရသည်။
အနှိပ်စက်ခံ ကရင်မိန်းကလေးငယ် အတွက် ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကို တောင်းဆို
10 Responses	LeaveaReply Cancel reply	Your email address will not be published. Required fields are marked *Comment Name * Email * Website Shwe Yoe December 22, 2012 - 11:23 am	I hope this is not forced relocation. If it is, another lawsuit will follow. Compensation, I mean fair compensation to relocated families. Let the people have lawyers to represent them before relocation is enforced.
Reply	pps12345 December 22, 2012 - 2:35 pm	တင်ဒါမပါ ပဲ နီးစပ်ရာကို လက်သိပ်ထိုး ချပေးလိုက် လို့ ရသွားတဲ့ ကုမ္ပဏီ ထင်ပါတယ်။
ပြည်သူ လူထု အကျိုးအတွက် တိုင်ပင်ညှိနှိုင်းခြင်းမပြု ပဲ လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်းပေါ်လွင် နေပါသည်။
MIC တွင် ရွှေသံလွင် လုပ်ငန်းစု မှ နောက်ကွယ်မှ ပံ့ပိုးနေသော လုပ်ငန်းများ သာ အလုပ်ဖြစ်နေကြကြောင်း၊ သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီးများသည်လည်း လုပ်ငန်းအမျိုးမျိုး၊ ကုမ္ပဏီ အမျိုးမျိုး လာရောက်တွေ့ဆုံနေသော်လည်း MIC မှ ရွှေသံလွင်ကို သာ ပုံဖျက် ပြီး နာမည် အမျိုးမျိုးဖြင့်မီဒီယာ သြဇာ ကိုအသုံးပြုကာ စိတ်တိုင်းကျ ချယ်လှယ်နေသဖြင့် စိတ်ဆင်းရဲနေကြောင်း သိရှိရပါသည်။
Reply	pps12345 December 22, 2012 - 2:36 pm	ပြည်သူ လူထု ကို ကြိုတင် အသိမပေးဘူးလား။
Reply	မင်းကြီးညို December 22, 2012 - 4:43 pm	လူထုဆန္ဒပြပွဲတွေလုပ်လာအုံးမှာလားစောင့်ကြည့်ရမှာပေါ့။ကြေးနီစီမံကိန်းတုံးကတရုတ်ကုမ္ပဏီ
အခုဘိလပ်မြေစီမံကိန်းကျတော့ အိန္ဒိယကုမ္ပဏီ။ ဟိုဟာလဲကန့်ကွက်၊ ဒီဟာလဲကန့်ကွက်ဆိုရင်
တော့ မြန်မာပြည်သူတွေကို နိုင်ငံတကာက အဆိုးမြင်ကြတော့မယ်။ ကုမ္ပဏီနဲ့ပြည်သူအပေး
အယူမျှတအောင်လုပ်ကြပါဗျာ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဘိလပ်မြေမလုံလောက်တာကြောင့် နိုင်ငံခြားမှ
Reply	Salai Lian December 24, 2012 - 1:08 pm	It is not too late to fix it. If we don’t fight it today, rule of law will become rule of lawlessness. Injustice cannot be allowed to exist even for one more day. So, do not blame the people but the generals and their cronies.
Reply	ka yin lay December 22, 2012 - 10:03 pm	Dear All….How can we trust this new government??? They said that they did for country..People lost their house,paddy fields,and their own belongings..Whatapity to the people?? When KNU came to the village,the villagers must give what they want, when burmese military soldiers came they must give what they want..Nothing change in Burma…
Reply	hotladylay December 23, 2012 - 4:54 am	ကရင်လူမျိုးအပေါင်းတို့ မကြာသေးမီက လက်ပံတောင်းတောင် စီမံကိန်းကြောင့် ရဟန်းသံဃာတွေတောင်မီးလောင်ဗုံးနဲ့ပစ်ခပ်ဖြိုခွင်းခံရတာ လယ်သမားတွေရဲ့လယ်ယာမြေတွေ သာသနာနယ်မြေတွေ ဘုရားကျောင်းကန်တွေဖျက်သိမ်းဖယ်ရှားပေးရတာ ဟာ စစ်တပ်အကျိုးစီးပွါး ဦးပိုင်ကုပ္မဏီနဲ့တရုပ်ကုပ္မဏီတို့ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိတဲ့ စီမံကိန်းကြောင့်ဖြစ်တယ်။အခု အိန္ဒိယနဲ့ အစိုးရလုပ်မဲ့ ဘိလပ်မြေစက်ရုံစီမံကိန်းကြောင့် ကရင်လူမျိုးတွေ ဘိုးစဉ်ဘောင်ဆက် နေထိုင်လုပ်ကိုင်စားသောက်လာတဲ့ လယ်ယာအိုးအိမ်တွေ ဖယ်ရှားပေးရတော့မယ် အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ လယ်ယာတွေ ဥယဉ်ခြံမြေတွေ အစိုးရအမိန့်နဲ့ ဖြက်ဆီးခံကြရတော့မယ်။ဘယ်သူကိုအားကိူးကြမလဲ KNU လား KNLA လား DKBA လား အကောင်းဆုံးကတော့ ကရင်လူမျိုးများအားလုံးကို့အားကိုကိုးစီးလုံးကြပြီး ကိုဖာကိုတိုက်မှရတော့မှာ ဘယ်သူ့ကိုမှအားကိုးလို့မရနိုင်ပါ။
Reply	hotladylay December 23, 2012 - 4:56 am	ဒါပထမဦးဆုံး ကရင်ပြည်မှာလုပ်မဲ့စီမံကိန်းနော် တောက်ထပ် အများကြီးရှိသေးတယ် KNU နယ်မြေထဲမှာ။
Reply	ohnmar December 24, 2012 - 3:32 pm	ပြောင်းရွှေ့ရမယ့်သူတွေကိုတန်ဖိုးရှိတဲ့လူလို့စဉ်းစားပေးပြီး တရားမျှတစွာစီစဉ်ပေး
Reply	ohnmar December 24, 2012 - 3:38 pm	ဖျက်သိမ်းခံရမယ်နေရမှကရင်လူမျိုးများယခုကတည်းရှေ့နေငှါးပြီးလျော်ကြေးရဖို့အတွက်